प्रा.डा. सविना भट्टराईको सल्लाह : कसरी बच्ने पिलोबाट - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ प्रा.डा. सविना भट्टराईको सल्लाह : कसरी बच्ने पिलोबाट
प्रा.डा. सविना भट्टराईको सल्लाह : कसरी बच्ने पिलोबाट
प्रा. डा. सविना भट्टराई बरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ तथा कस्मेटिक सर्जन काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल सोमबार, २०७६ मंसीर ९ गते, १०:११ मा प्रकाशित
कपालको जराको संक्रमणका कारण देखा पर्ने एक किसिमको ठूलो घाउ अथवा खटिरालाई पिलो भनिन्छ । यो एक किसिमको ब्याक्टेरियल इन्फेक्शन हो । व्यक्तिमा यो सरसफाइको कमीको कारण देखा पर्दछ । यस्ता खटिरा रौं तथा कपाल भएको शरीरको जुनसुकै भागमा पनि देखा पर्छ ।
एक किसिमको गाँठो बराबरको रुपमा देखिने उक्त खटिरा शरीरको मथिल्लो सतहदेखि शरीरको बोसोसम्म किटाणुले संक्रमण गरेको कारण देखा पर्दछ । यस्ता किटाणुहरु विशेषगरी हाम्रो शरीरको नाक तथा दिसा बस्ने ठाउँ वरपर रहन्छ ।
तसर्थ, शरीरमा सरसफाइको कमी भएको खण्डमा उक्त किटाणुहरुले हामीलाई आक्रमण गर्दछ । शरीरको माथिल्लो भागमा मात्रै ती किटाणुले आक्रमण गरेको खण्डमा भने व्यक्तिको शरीरमा स–साना बिबिरा तथा खटिराहरु देखा पर्दछ । तर, ती किटाणुहरुले शरीरको बोसोसम्मै प्रभाव पारेको अवस्थामा भने यसले पिलोको रुप लिन्छ । यो पीप तथा दुषित रगतहरुले भरिएको कारण अत्यन्तै चिलाउने र दुख्ने हुन्छ ।
पिलो आउनुका कारणहरु
प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमी
मधुमेह र थाइराइड रोगको संक्रमण
शरीरमा पिलो देखा नपरोस् भन्नका निमित्त हामीले सर्वप्रथम आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । शरीरको प्रत्येक भाग समय समयमा सफा गरी शरीरलाई सफा तथा स्वस्थ्य राख्नु पर्दछ । यसका साथै हामीले घर बाहिर निस्कनु अघि शरीर ढाक्ने कपडा लगाउनु पर्दछ । यस्ता समस्याले विशेष गरेर थाइराइड र सुगर भएका बिरामीहरुलाई सताउने गर्दछ । उनीहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर हुने भएकाले पनि यस रोगले बढी सताउँछ ।
हामीमध्ये अधिकांश व्यक्तिहरुले यस्ता समस्या देखा परेमा पिलोलाई पाक्न दिई निचोर्ने गर्छौ । तर, यसो गर्नाले निचोरिएको उक्त घाउबाट बगेको पीप र रगतमार्फत ब्याक्टेरियाहरु झन शरीरको अन्य भागमा समेत सर्ने हुनाले यसो गर्नु हुँदैन । त्यसैले यस्ता समस्याहरु देखा परेमा तुरुन्त सम्बन्धित चिकित्सकसँग परामर्श लिई एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।